Abavelisi bamva nje Jgo
Ikhaya > Iimveliso > I-Wature ye-smart smart
Iiwotshi ze-Smart zibukele zinokulungisa ulwazi kwaye zihlangabezane neemfuno ezisisiseko zobugcisa. Umsebenzi wayo uyafana nomncedisi wedijithali. Ukongeza ekubonakaliseni ixesha, kufanele ukuba ibe nemisebenzi enye okanye engaphezulu yokukhumbuza, ukuhamba, ukubekwa phambili, ukubeka iliso, kunye nokusebenzisana.
Umzekelo, iComet, i-Pedmetter, isikrini sokuchukumisa, inkqubo yokubeka i-jikelele, kunye nesixhobo esikhulu sokugcina isikhundla, njl.njl, iindlela zokubonisa zibandakanya izikhombisi, amanani, njl njl.
Iiwotshi ze-Smart zihlulwe ikakhulu kwezi zigaba zintathu zilandelayo:
1. Iiwotshi zabantu abadala
Umsebenzi: I-Bluetooth inokuvumelanisa iifowuni zefowuni, Thumela kwaye ufumane imiyalezo, ukubeka iliso kulala, ukubeka iliso kwixabiso lentliziyo, ividiyo esebenzayo, ividiyo, ividiyo, yenzelwe i-fashndssetters yefashoni!
2. Ukujonga i-smart abantu abadala
Imisebenzi: Ukubekwa kweentsapho I-GPS, iifowuni zosapho, iifowuni zexesha likaxakeka, izikhumbuzo zentliziyo, ukusinika iambrel yabantu abalupheleyo, ukuzisa le mboniso-mhlophe kwakhona!
3. Bantwana'Ukubeka iliso le-smart
Imisebenzi: Ukubekwa kweMisebenzi emininzi, incoko yeendlela ezimbini, iSos ngoncedo, iMkhondo elahlekileyo, elahlekileyo, ucingo lwe-elektroniki, imbuyekezo ye-elektroniki, imbuyekezo ye-elektroniki, i-pedlime, i-pedmie, i-pedmie, ikhuselekile Imeko yokukhula!